Mijanona ao amin'ny hotely mora vidy any Kroasia ireo mpizahatany Czech
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mijanona ao amin'ny hotely mora vidy any Kroasia ireo mpizahatany Czech
Septambra 2, 2019
Ny mpizahatany tseky ao Kroasia dia heverina ho mora vidy ary fanentanana fanavakavahana no natomboka tamin'ireo mpizahatany mitsidika an'i Kroasia avy any amin'ny Repoblika Tseky, samy firenena EU.
Manodidina ny iray tapitrisa amin'ireo mpizahatany toa heverina ho mora no mitsidika ny Adriatika isan-taona, hoy i Jan Papež, mpitondra tenin'ny Fikambanana Tseky momba ny dia any Blesk. “Tena tsy ara-drariny ny manome anay ny hajia 'mpizahatany pašteta'. Ny vahiny tseky dia tena manandanja tokoa ho an'ny Kroaty. Manakaiky ny iray tapitrisa ny olona tonga ao amin'ny Adriatika isan-taona, "hoy i Jan Papež, mpitondra tenin'ny Fikambanana Tseky momba ny dia any Blesk.
Ankoatr'izay, hoy i Papež, dia tsy mandany ny fahavaratra fotsiny hijanonany any amin'ny trano mora vidy indrindra. "Betsaka no mankany amin'ny hotely kintana efatra sy sokajy avo kokoa," hoy izy nanampy. Nasongadiny ihany koa fa taorian'ny ady tany am-piandohan'ny taona 1990, rehefa tsy liana teto Kroasia izao tontolo izao, dia ny Czech no tonga lohalaharana. ”
Manohy manenjana haino aman-jery iray any an-toerana i Papež, mitsidika an'i Kroasia ny isan'ny Czech na dia miakatra aza ny vidim-piainana. ”
Ankoatr'izay tamin'ny taon-dasa, 32,763 ny sambo Czech nitsidika an'i Kroasia (ary nahatsapa alina 218,404). Ary mety tsy mila adinina fa tsy nihinana pate izy ireo, hoy ny nosoratan'ny mpanoratra. Ny ankamaroan'ny mpizahatany tseky koa dia manofa sambo eny an-toerana, eo anelanelan'ny 800 ka hatramin'ny 50,000 euro isan-kerinandro.
Fa ny vola laniny dia tsy mifarana eto. Ny sambo mitaingina sy miantsoroka dia tsy maintsy dinihina ihany koa. Ohatra, ao amin'ny Split, ny fiantsonan'ny yacht iray manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 metatra dia manodidina ny 700 ka hatramin'ny 1600 kuna isan'alina. Ny Kuna dia eo amin'ny 0.14 Euro na 0.16 Dolara amerikana.
Ny fijanonana fiara ao amin'ny marina dia mitentina 40 ka hatramin'ny 60 euro isan-kerinandro, ankoatry ny rano velona, ​​solika na herinaratra, wifi mandritra ny alina mipaka ao amin'ny marina. "Araka ny tombatombana marobe, ny mpandeha sambo Czech dia mandany eo amin'ny 180 tapitrisa kuna ao amin'ny firenena izay miantso antsika hoe" mpizahatany pašteta "," hoy i Blesk nanampy.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny Oniversiten'i Rijeka tamin'ny taon-dasa, ny Czechs dia mandany eo ho eo amin'ny 390 kuna isan'andro any Kroasia, izay tsy ampitahaina amin'ny anglisy izay mandany 915 kuna eo ho eo. Na izany aza, ny mpizahatany betsaka indrindra dia mpizahatany ao an-trano. Mandany fotsiny izy ireo 368 kuna isan'andro.
5,489,607 Alim-pirenen'i Czech any Kroasia amin'ny fandaniana antonony, mitovy amin'ny 2.2 miliara kuna ho an'ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahantany Coration tamin'ny taon-dasa fotsiny tamin'ireo mpizahatany Czech mora vidy ireo. Afaka miantso ity profiling tsy ara-drariny ity ny olona.
KLM dia tia an'i Boeing 777-300ER ary nametraka $ 751 tapitrisa ao ambadik'izany
Destination Africa avy amin'i Wakanow.com any Kenya dia miditra ao amin'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany
Ny fiarahamonina Afrikana Atsinanana dia mijaly amin'ny fizahan-tany goavambe sy fahaverezan'ny asa